မင်း လက်ရှိနေရာ ရောက်ဖို့
ငါ ဆိုတဲ့ကောင်က ဟောဒီ့ပုခုံးနဲ့ ထမ်းတင်ခဲ့ရတာပါ လို့
ပရိသတ် ဗိုလ်ပုံအလယ် ငါ ဘယ်နှစ်ခါများ ကျူးရင့်ခဲ့ဖူးသလဲ.....
ငါ့ ကောင်းကင်ကြီး တခုလုံး ထက်ပိုင်းချိုးလို့ ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်
ကောင်းကင်တဝက်မဟုတ် နှစ်ပိုင်းစလုံး မင်းအပိုင်ယူ
ဧတဒဂ်ရ လေးသည်တော်ရဲ့ မြားချက်တွေအလား
မင်းနှုတ်ထွက် စကားတွေ အဆိပ်လူး
ငါ့ တကိုယ်လုံး ဆူးခံခဲ့ရတဲ့ ကောင်ရယ်....
မာယာတွေပါ လို့ အသေအချာ သိနေလည်း
ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်တဲ့ စကားလုံး ပင်လယ်ထဲ
အလဲလဲ အကွဲကွဲမျောရင်း အသက်ရှင်ခြင်းတွေ ဆက်နေခဲ့ရတဲ့ကောင်....
မင်းဆီက အပြုံးတုလေး တပွင့်တလေ ကြွေကျလာရင်တောင်
အရိပ်အရောင် မထင်တော့တဲ့ ငါ့အသက်ရှုသံတွေကြား
ငါ့ကိုယ်ငါ အပြေးအလွှား လိုက်လံ ရှာဖွေနေမိတယ်......
လင်းခေတ် Fri Jul 02, 11:36:00 AM GMT+8
ကောင်းလိုက်တဲ့ကဗျာလေးး))) အမ ကဗျာရေးတာ ရှားတယ်နော် ရေးတော့လည်း တကယ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါပဲး))))
မောင်သီဟ Fri Jul 02, 12:29:00 PM GMT+8
မင်းဆီက အပြုံးတုလေး တစက်တလေ ကြွေကျလာရင်တောင်
မော့သောက် မြိုချမိတဲ့ကောင်...” တကယ်ကောင်းတယ်အဖွဲ့ပဲ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Fri Jul 02, 01:39:00 PM GMT+8
SHWE ZIN U Fri Jul 02, 02:02:00 PM GMT+8
Hmoo Fri Jul 02, 02:08:00 PM GMT+8
Cameron Fri Jul 02, 02:29:00 PM GMT+8
“ငါ့ ကောင်းကင်ကြီး တခုလုံး ထက်ပိုင်းချိုးလို့ ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်
မိုက်တယ်ကွာ ငါ့အမချစ် လက်စောင်းထက်ပုံများ....ကဗျာဆရာတွေရှုံးလောက်တယ်..။
မောင်မိုး Fri Jul 02, 03:09:00 PM GMT+8
ဘယ်ဟော်တယ်တက်ပြီးရေးထားတဲ့ ကဗျာလည်း ။ နောက်နဲ့နော်..။
မောင်မိုး Fri Jul 02, 03:13:00 PM GMT+8
မောင် လေး Fri Jul 02, 06:45:00 PM GMT+8
မော့သောက် မြိုချမိတဲ့ကောင်... တဲ့လား
နေ၀သန် Fri Jul 02, 08:28:00 PM GMT+8
ညီမလေး Fri Jul 02, 08:50:00 PM GMT+8
မကြာခင် ရှာတွေ့မှာပါ ။ မေတ္တာမှန်ရင် ရောင်ပြန်ဟပ်စမြဲလေ ...
ချိုကျ Fri Jul 02, 09:22:00 PM GMT+8
အစ်မရေ...အနင့်နာခံမှု့ ပေးဆပ်မှု့ ခံစားတတ်မှု့ တွေပြည့်နေတဲ့ ကဗျာကောင်းလေးတစ်ပုဒ် ကို စိတ်နဲ့ဖတ်သွားပါတယ်။ နောင်လည်း ကဗျာတွေရေးနိုင်ပါစေလို့.....။
sosegado Sat Jul 03, 01:04:00 AM GMT+8
ကဗျာကို ခံစားသွားပါသည် ငါ့ကိုယ်ငါ အပြေးအလွှား လိုက်လံ ရှာဖွေနေမိတယ်...... ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။
Shinlay Sat Jul 03, 01:38:00 AM GMT+8
လသာည Sat Jul 03, 07:37:00 AM GMT+8
ကဗျာလေးက ထိတယ်။ ဖတ်ရတာ ကြိုက်လိုက်တာ.
ဇွန်မိုးစက် Sat Jul 03, 11:28:00 AM GMT+8
စကားလုံးတွေ မိုက်တယ်ဗျို့။ နောက်ဆုံးနှစ်ပိုဒ်ကို အကြိုက်ဆုံး
ဏီလင်းညို Sat Jul 03, 12:51:00 PM GMT+8
ရေသန့်Sat Jul 03, 01:38:00 PM GMT+8
ငါ့ ကိုယ်ငါတွေ့ နိုင်ပါစေ လို့ ရင်ကိုဖွင့် ချလိုက်တယ်
အင်ကြင်းသန့် Sat Jul 03, 02:44:00 PM GMT+8
ဖတ်ပြီး မျက်ရည်ဝဲသွားလို့ ပြန်ပြီး((
Unknown Mon Jul 19, 06:11:00 AM GMT+8
စကားလုံးတွေက မာလှချည်လား အစ်မရ..
ဘယ်က ဘယ်လို ဘာခံစားချက်နဲ့ ရေးတာလဲ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။
Cebu မြို့(ဖိလစ်ပိုင်) သို့ တခေါက်-၃
Cebu မြို့(ဖိလစ်ပိုင်) သို့ တခေါက်-၂
Cebu မြို့(ဖိလစ်ပိုင်) သို့ တခေါက်-၁
Cebu မြို့(ဖိလစ်ပိုင်) သို့ တခေါက်
ထွေရာ ၄ ပါး
ကမ်ဘာသဈဆီသို့.....နှုတျဆကျမိုး - "ကိုယျ့အကွောငျးတှကေို ကုနျကွမျးလုပျတာ ရပျသငျ့ပွီ"လို့ ခဏခဏပွောတတျတဲ့သူက ခုတော့ သူ့အကွောငျးတှေ တဖှဲ့တနှဲ့ရေးတတျတဲ့ ကြှနျမစာတှကေို မြှျောနတေတျပွီ........
ကနျစှနျးဥ ခေါကျဆှဲကွျော - ဒီတဈခါတော့ အသားမပါပမေဲ့ အရမျးစားလို့ ကောငျးလှနျးတဲ့ ကနျစှနျးဥ ခေါကျဆှဲကို ခပျခြိုခြိုလေး ကွျောစားဖွဈပါတယျ။ အရသာ အခြိုအစိမျ့လေး ရပွီး စားလို့ကောငျး တ...
ကွှားခွငျးအနုပညာ …. - တူတျောမောငျဟာ ကိုယျ့အဖနေဲ့ အတျောတူတယျ ညဏျထကျတယျ၊ ပါးနပျတယျ၊ တိကတြယျ၊ သူသိသူတတျ ဆရာကွီး၊ သူသိတာဆိုရငျလညျး သိပျပွောပွခငျြတာ။ ပုံဆှဲတျောတာကတော့ သူ့ကွီးတျော...